ဂျပန်နိုင်ငံ၏ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုတာ ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင်မျိုးပါလဲ? | Japan Care Worker Guide
ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဓိကအားဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုအစရှိသော ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရှိသောအကြောင်းကြောင့် နေ့စဉ်ရှင်သန်နေထိုင်လည်ပတ်ရာတွင် ချို့ယွင်းချက်ရှိသူအား ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရပ်တည်နိုင်အောင် ကူညီလက်ကမ်းပေးအပ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများစသည့် နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝအား မိမိ တစ်ယောက်တည်းနှင့် လည်ပတ်ဖို့ရန်အခက်အခဲရှိသောသူအပေါ်တွင် အစားအသောက်နှင့် အညစ် အကြေးစွန့်ခြင်း၊ ရေချိုးသန့်စင်ခြင်းစသော နေထိုင်စားသောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အမျိုးမျိုးသော လှုပ်ရှားမှုများကို ရောဂါလက္ခဏာအသီးသီး၏ပြင်းထန်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အစရှိသည်တို့ကိုလိုက်၍ ကူညီဖေးမပေးရပါမည်။ အလုပ်လုပ်ရသောနေရာဌာနများမှာ ပြုစုစောင့်ရှောက်‌ရေးဂေဟာ၊ နေ့ဖက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ၊ စောင့်ရှောက်ခံဘိုးဘွား၏နေအိမ်စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
・စားသောက်ရာတွင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ရေချိုးရာတွင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဆီးဝမ်းသွား ရာတွင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ရွေ့လျားရာတွင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်အသုံးပြု ရာတွင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊
・ဆရာဝန်နှင့်သူနာပြုစသောလုပ်ငန်းချင်းဆက်စပ်နေသူများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
・အိမ်ပြင်ထွက်ခြင်း၊ စိတ်အပန်းဖြေစရာများအား စီစဉ်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်ဝင်ခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ကျခြင်းအကြောင်းရင်းများကြောင့် မိဘနှင့်ခွဲခွါကာ နေထိုင်နေကြသောသားသမီးများမှာ များပြားသဖြင့် မိဘများမှာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာသောအခါ တစ်ယောက်တည်း သို့မဟုတ် နှစ်ယောက်တည်း နေထိုင်စားသောက်ကြသောပုံစံသို့ ဦးတည် ပြောင်းလဲလာပါသည်။ ဤနေရာတွင် အကယ်၍သာ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိနေခဲ့ပါက အကူအညီမပါဘဲ နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝကိုလည်ပတ်ရန်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်လာပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရန်လိုအပ်လာပါသည်။ ထို့အတွက် သက်ကြီးရွယ်အိုများပြားလာသောပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ပြုစု စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစနစ်နှင့် ဂေဟာများကို အလေးပေးစီစဉ်ထားရှိပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံရှိသော ဖိလစ်ပိုင်မှ မစ္စတာ အဲလ်ဘတ် ဖာနန်ဒက်ဇ်သည် “ဖိလစ်ပိုင်မှာလည်း သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ဂေဟာများရှိပေမယ့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာလို့ မခေါ်ပါဘူး။ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အလားတူ ပြုစု စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာလည်း မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်း သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ နေလို့ရတဲ့ နေရာပါပဲ” ဟု ပြောပြပေးခဲ့ပါသည်။ ကလေးငယ်နည်းပါးပြီးသက်ကြီးရွယ်အိုများပြားလာခြင်းနှင့် မိဘနှစ်ပါး၊ သားသမီးများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောမိသားစုပုံစံ (nuclear family) ဖက်သို့ပြောင်းလဲ လာခြင်းများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သောဂျပန်နိုင်ငံသည် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတွင် ရှေ့အရောက်ဆုံးသောနိုင်ငံလည်းပဲဖြစ်ပါသည်။ နောင်တွင် အာရှတခွင်ရှိနိုင်ငံများ တွင်လည်း သက်ကြီးရွယ်အိုများပြားသောပြဿနာ စတင်လာမည်ဟုခန့်မှန်းတွက်ချက်ရသော ကြောင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတွင် ရှေ့ရောက်နေသော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နည်းပညာများကို လေ့လာ သင်ယူနိုင်ရန် အခွင့်ရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်တွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များနှင့် စကားပြောဆို ဆက်ဆံရသည်ကများ၍ သာမန်အားဖြင့်အမျိုးမျိုးသော စကားများကိုပြောဆိုရပါသည်။ ပြုစု စောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်၏ လုပ်ရကျိုးနပ်မှုကို တွေ့မြင်ခံစားရသည်ဟုဆိုရာတွင် အဆိုပါစကားပြော ဆိုဆက်ဆံရာတွင် “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု ကျေးဇူးဥပကာရစကားကို လက်ခံရရှိသောအချိန် အများအပြားရှိသည်ဟုဆိုပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားမှ မစ္စ ရစ္စဝန်တီထံမှနားထောင်ကြည့်သောအခါ “လုပ်ရကျိုးနပ်တယ်လို့ခံစားရတာက ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမှာ စောင့်ရှောက်ခံဘိုးဘွားတွေရဲ့စကားကိုနားလည်ပြီး သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒအရ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးပြီးတဲ့နောက် စောင့်ရှောက်ခံဘိုးဘွားတွေရဲ့ အပြုံးမျက်နှာကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာ အထူးသဖြင့်လုပ်ရကျိုးနပ်တယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ စောင့်ရှောက်ခံဘိုးဘွားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့လည်း မကြာခဏဆိုသလို စကားပြောဆိုဆက်ဆံရပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းတွေ၊ ခေါင်းမှာ ဟီဂျပ် (အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများ ဦးခေါင်းနှင့်နားရွက်တို့အား ဖုံးအုပ်ကာကွယ် ထားသည့် ပုဝါစ) ကိုဆောင်းထားရတဲ့အကြောင်းရင်းစတာတွေကို ပြောဆိုကြရင်း ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပါတယ်” ဟု ပြောပြပေးခဲ့ပါသည်။
ဘယ်လိုလူမျိုးက ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်နှင့် ကိုက်ညီပါသလဲ?
စကားပြောရတာကြိုက်နှစ်သက်သောသူနှင့် သူတပါး၏စိတ်ကိုနားလည်ပေးတတ်သောသူမျိုးတွေက ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်နှင့် ကိုက်ညီသည်ဟုဆိုကြပါသည်။ ထို့အပြင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး အလုပ်တွင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ “ခွန်အား” ရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အခုနောက်ပိုင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပတ်သက်၍လေ့လာမှုပြုလုပ်ခြင်း၊ စက်အားကို အသုံးချခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ခွန်အားမလုံလောက်မှုအား ထောက်ပံ့ပေးထားပါသေးသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်အားလုပ်ကိုင်ခဲ့သောအတွေ့အကြုံရှိသည့် ဂျပန်လူမျိုး မဟုတ်သော သူများထံမှ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီသောသူ၏ထူးခြားချက်များကို မေးမြန်းကြည့်ခဲ့ ပါသည်။
・“စောင့်ရှောက်ခံဘိုးဘွားများနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကလည်း လိုအပ်တာကြောင့် စကားပြောရတာကြိုက်တဲ့သူက ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီပါ တယ်။ ပြီးတော့ ကြင်နာတတ်ပြီး တက်တက်ကြွကြွနှင့် သူတပါးရဲ့စိတ်ကို နားလည်ပေးတတ်တဲ့သူက ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းအဖြစ် အရမ်းကိုလိုက်ဖက်ပါလိမ့်မယ်”
・“ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်နိုင်တဲ့သူဟာ အကောင်းမြင်တတ်သူ၊ တည်ကြည်လေးနက်သူ၊ လေ့လာသင်ယူသူ၊ ပွင့်လင်းသူ၊ ခွန်အားပြည့်ဝသူပဲဖြစ်ပါတယ်”
・“ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်မှာ ခွန်အားသုံးရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်ပုံရဲ့အသုံးပြုနည်းကို မှတ်သားထားမယ်ဆိုရင် သက်သက်သာသာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လှုပ်ရှားရာမှာအထောက်အကူပြုတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတဲ့အတွက် အဲဒီလိုစက်တွေ ကိုင်တွယ်ပုံကိုမှတ်သားထားနိုင်မယ်ဆိုရင် သေချာပေါက် အားသန်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး”
ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခါ အနာဂတ်ဘဝတက်လမ်းမှာ မည်ကဲ့ သို့သောရွေးချယ်မှုများရှိနိုင်ပါသလဲ? ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး အတွေ့အကြုံများကို စုစည်းထားပြီး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ခေါင်းဆောင်နေရာကို မျှော်မှန်းထားသောသူများရှိနိုင်သလို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးဝန်ထမ်းအစရှိသည့် နိုင်ငံတော်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်နေသူများလည်း အများအပြားရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) N1 ရယူ၍ ဂျပန်နိုင်ငံမှာတွင်သာမက မိမိနိုင်ငံမှာလည်းပဲ ကောင်းစွာ အသုံးချချင်ပါသည်ဟု စဉ်းစားကြသူများလည်း အများအပြားရှိလိမ့်မည်ဟုထင်ရပါသည်။
“မိသားစုအခြေအနေကြောင့်နိုင်ငံကိုပြန်ခဲ့ရပေမယ့် ဂျပန်မှာသင်ယူခဲ့ရတဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း အကြောင်းအရာတွေနှင့် ဂျပန်ဘာသာစကားကို ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလည်း သင်ပေးသွားချင်ပါတယ်” (ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသူ မစ္စ ဟုန်သီငုပ်အန်း) ဟူ၍ သက်မွေးမှုပုံစံသစ်ကို တည်ဆောက်သွားမည်ဆိုသော သူလည်း ရှိပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများပြားလာမှုနှင့်လိုက်၍ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြသည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မှာ မလုံလောက်နေသည့်အတွက် အမျိုးမျိုးသော ကြိုးစားအားထုတ်မှုများမှတဆင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်‌ရေးဝန်ထမ်းအင်အားကို တိုးပွားလာအောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအထဲတွင် နိုင်ငံခြားမှသူများလည်း စိတ်ချလက်ချနှင့် ဂျပန်သို့လာ၍ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် ပြင်ဆင်မှုများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်အကိုင်အား အနည်းငယ်မျှပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာမည် ဆိုလျှင် အတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်မိပါမည်။